असार १४ गतेको चुनावका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र निर्वाचन आयोगकाबीच छलफल जारी
काठमाडौ, १ असार । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधीकारीलाई सिंहदरबार बोलाउनुभएको...
बिहिबार, असार १, २०७४ 105
दैलेखको आठविसकोटमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, ११ को मृत्यु
दैलेख, ३१ जेठ । कालिकोटको जितेकांडाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको बस दैलेखको आठबीसकोट नगरपालिका–४ मा दुर्घटना हुंदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ 92
राजपा र प्रमुख तीन दलको बैठक निष्कर्षविहिन, बिहिबार बिहान फेरी बैठक बस्ने
काठमाडौ, ३१ जेठ । प्रमुख तीन दल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको क...
बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ 184
राजपासँग निर्णायक वार्तामा दलहरु
काठमाडौं, ३१ जेठ । संविधान संशोधनविना चुनावमा सहभागी नहुँने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग प्रमुख दलहरुले आज निर्णायक वार्ता गर्ने भएका छन् । स...
बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ 93
तीन दलको बैठकमा कसले के भने ?
काठमाडाैं, ३१ जेठ । राजपाले मधेसमा आन्दोलन चर्काएपछि मंगलबार साँझ सत्तारुढ घटकका तीन दल (कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक) र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच बैठक बसेको थियो ।
बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ 95
चुनावको सबै तयारी पुरा, निर्वाचन आयोग भन्छ–मधेशका जनता निर्वाचनमा पक्षमा छन्
काठमाडौ, ३० जेठ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले मधेशका जनता निर्वाचनको पक्षमा रहेको दावी गर्नु भएको छ ।
स्थानीय तह चुनाव, तराईमा तनाव
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकार र राजपाका नेताहरुबीच भएको वार्ता निश्कर्ष बिहीन भएपछि राजपाले आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै तराईका जिल्लामा तनाव शुरु भएको छ । राजपाका कार्यकर्ताहरुल...
मङ्लबार, जेष्ठ ३०, २०७४ 583
अख्तियारले सार्वजनिक गर्यो यसवर्षका घुस्याहाको लिष्ट
काठमाडौ, २९ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुष लिएको आरोपमा पक्राउ परेका सबैभन्दा धेरै कर्मचारीहरु काठमाडौं उपत्याकाका रहेको जनाएको छ ।
सोमवार, जेष्ठ २९, २०७४ 87
आमहड्तालले चुनावलाई केही असर गर्दैन– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव
विराटनगर, २९ जेठ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधीप्रसाद यादवले दोस्रो चरणको चुनावका बेला बन्द हड्ताल गरिएपनि जनता मतदान स्थलमा आउने र चुनाव सम्पन्न हुने बताउनुभएको...
सोमवार, जेष्ठ २९, २०७४ 157
राजपाद्वारा असार १० गतेदेखि आमहड्ताल सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौ, २८ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आमहड्तालसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौमा बसेको र...
आइतवार, जेष्ठ २८, २०७४ 149
सत्तारुढ दल र राजपाको आजको बैठक पनि निष्कर्षविहिन
काठमाडौ, २८ जेठ । सत्तारुढ दल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको आजको ब...
आइतवार, जेष्ठ २८, २०७४ 87
भरतपुरमा पुनः चुनाव कि मत गणाना ? फैसला आज
काठमाडौं, २८ जेठ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को रोकिएको गतगणना पुनः शुरु गर्ने की पुनः चुनाव भन्ने विषयमा आज सर्वोच्चमा बहस हुँदैछ । सर्वोच्चले आजको इजलासमा पक्ष...
आइतवार, जेष्ठ २८, २०७४ 98